Say, Tell, Speak & Talk - Myanmar Network
Say, Tell, Speak & Talk
Posted by AungKoU (UMK) on November 13, 2013 at 6:29 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား လေ့လာတဲ့အခါ စကားလုံး အသုံးအနှုန်း (usage) ဟာ အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုပါ၊ စကားလုံး အဓိပ္ပာယ်ခြင်း တူညီပေမယ့် သုံးနှုန်းတဲ့ နေရာမတူညီကြပါဘူး။ မိခင်ဘာသာ စကား ဖြစ်တဲ့ မြန်မာမှာလည်း အလားတူ အဖြစ်တွေရှိပါတယ်။
ဥပမာ ဖယောင်းတိုင် မီးထွန်းတယ်၊ ဆေးလိပ်မီးငြိတယ်၊ မီးမွှေးတယ်၊ အစရှိသည်ဖြင့် အဓိပ္ပာယ်ခြင်း တူညီပေမယ့် သုံးတဲ့ စကားလုံးပုံစံများ မတူညီပါ။ ထို့အတူ ဖယောင်းတိုင်း မီးမွှေးတယ်၊ ဆေးလိပ်မီးထွန်းတယ် လို့လည်း ပြောင်းလည်း သုံးလို့မရနိုင်ပါ။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမှာလည်း ထိုနည်းတူပါ။ နေစဉ်သုံးစွဲနေရတဲ့ Say, Tell, Speak, Talk စတဲ့ စကားလုံးတွေဟာ “ပြောသည်” ဆိုတဲ့ မြန်မာလို အဓိပ္ပာယ်ခြင်း တူပေမယ့် သုံးနှုန်းတဲ့ ပုံစံများ မတူညီပါ။
Say = refer
တစ်စုံတစ်ယောက် ပြောတဲ့စကားကို ပြန်လည် ရည်ညွှန်းပြီး ပြောလိုတဲ့အခါ Say ကို သုံးရပါတယ်။ Say ကို singular subject နဲ့တွဲသုံးတဲ့အခါ အသံထွက် ပုံစံကို သတိထားရပါမယ်။ He says ကို ဆစ်(စ်)လို့ ထွက်ပါတယ်၊ ဆေး(စ်)လို့ အသံမထွက်ရသည်ကို လည်း သတိပြုပါ။
- My father says like this. (အဖေက ဒီလိုပြောတာ)
- Did you say so? (မင်း အဲဒီလို ပြောခဲ့သေးလား)
- I never say so. (ငါ အဲဒီလို တစ်ခါမှ မပြောဖူးပါဘူး)
Tell = narrate
အကြောင်းအရာတစ်ခုခု ကို တစ်ဆင့်ပြန်လည် ပြောပြသည့်အခါ Tell ကို သုံးနိုင်ပါတယ်။
- Please tell me the film that you watched last week. (ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်က မင်းကြည့်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကား အကြောင်းကို ပြန်ပြောပြပါ။)
- Can you tell me about your family please? (မင်းရဲ့မိသားစု အကြောင်းကို ပြောပြနိုင်မလား?)
Speak = language & chat
ဘာသာစကား စွမ်းရည်ကို ပြောလိုသော အခါ၊ အလာဘ သလာဘ၊ စကားစမြည် ပြောလိုသောအခါ Speak ကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ -
- Do you speak English? (မင်း အင်္ဂလိပ်လို ပြောတတ်လား?)
- I want to speak with you. (မင်း နဲ့ငါ စကားပြောချင်လို့) အာလာဘ၊ သလာဘ ပြောလိုသည်ကို ဆိုလိုသည်။
Talk = discuss
အကြောင်းအရာ တစ်ခုကို ဦးတည်ပြီး ပြောဆိုလိုသော အခါ talk ကို သုံးနိုင်ပါတယ်။
- What are you talking about? ( ဘာတွေ ပြောနေကြတာလဲ?)
ဒီနေရာ မှာ Chat နဲ့ Discuss ကို နည်းနည်း ကွဲပြားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Chat ဆိုသည်မှာ ရောက်တတ်ရာရာ ဦးတည်ချက် သေသေချာချာ ရေရေရာရာ မရှိဘဲ ပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပြီး၊ Talk (discuss) ဆိုသည်မှာ ခေါင်းစဉ်တစ်ခု အောက်မှာ အားလုံး ပါဝင်ပြောဆိုကြခြင်း ကို ဆိုလိုသည်။ ဥပမာ- မိန်းကလေးများ ဆုံကြသည့်အခါ ကိုရီးယား ဇာတ်လမ်းအကြောင်းပြောကြသည်ဆိုကြပါစို့၊ ထို့အတူ ယောင်္ကျားလေးများ ဆုံကြသည့်အခါ ဘောလုံးပွဲ အကြောင်းပြောသည်ဆိုကြပါစို့၊ မည်သူက မှ တိတိကျကျ သတ်မှတ်မထား သော်လည်း အားလုံးက ကိုရီးယား ဇာတ်ကား၊ ကိုရီးယား မင်းသား/ မင်းသမီး၊ ဘောလုံးပွဲအကြောင်း၊ ဘောလုံးသမားများ အကြောင်း စသည်များကို ပြောဆိုနေကြခြင်းမျိုးကို ဆိုလို ပါတယ်။
Say – refer
Tell – narrate
Speak – language & chat
Talk – discuss
ဖော်ပြပါ စကားလုံးများကို အခြား အဓိပ္ပာယ်များဖြင့် သုံးနှုန်းသည်များ ရှိသော်လည်း ပြောသည်ဆိုသည့် အဓိပ္ပာယ်ကို အဓိကပြောလိုသောကြောင့် အခြားသော အဓိပ္ပာယ်ဖြင့် သုံးနှုန်းသည်များကို ချန်ထားခဲ့ပါတယ်။ အလျင်းသင့်လျှင် ဆက်လက်ရေးသားပါဦးမယ် …. ။
အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာသူတိုင်း မှန်မှန်ကန်ကန် အသုံးချနိုင်ပါစေ ……
Permalink Reply by morning glory on November 13, 2013 at 13:37
thanks for sharing, now we clear the usage of above words.
Permalink Reply by Diamond on November 13, 2013 at 14:30
Permalink Reply by Htoo Rein Lwin on November 13, 2013 at 20:55
Thank so much,Sir.
Permalink Reply by Phyo Phyo Wai on November 14, 2013 at 12:24
now i see ,how can use this word
Permalink Reply by Kyu Kyu on November 15, 2013 at 14:18
Permalink Reply by win nandar on November 16, 2013 at 8:46
Permalink Reply by Nandar on November 19, 2013 at 12:12
I really appretiate your work!
Permalink Reply by ayethawtarsan on November 20, 2013 at 16:53
Permalink Reply by Learner on November 21, 2013 at 10:04
Permalink Reply by Soe Soe on December 1, 2013 at 11:35